စပိန်အတွက် Noun ၏ကျား
ကျား, မ, စပိနျ Noun ၏ဟာမွေးရာပါကို Characteristic
Noun နှစ်ခုခွဲခြားသတ်မှတ်ပုံ: ပုလ်နှင့် Feminine
ယောက်ျားလူသားတွေအများစုတိရစ္ဆာန်များ၏ဟာမွေးရာပါလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်သကဲ့သို့ကျားစပိန်နာမ်တစ်ခုမွေးရာပါလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ သာအနည်းငယ်ခြွင်းချက်, ထိုကဲ့သို့သော dentista အဖြစ်အလုပ်အကိုင်၏အများအားဖြင့်သူတို့နှင့်အတူ, နာမ်၏ကျားမဆက်စပ်နှင့်အတူမပြောင်းပါဘူး, နှင့်နာမ်ရဲ့ကျားအများအပြား၏ပုံစံကိုဆုံးဖြတ်သည် adjective နာမဝိသေသန ကကိုဖော်ပြရန်သော။
ဥပမာအားဖြင့်, form မှာဣတ္ဖြစ်သော una jirafa, ကအထီးသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးရဲ့ရှိမရှိတစ်သစ်ကုလားအုပ်တစ်ကောင်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ အချို့သောလူများအတွက်, ကအစားသူတို့ကိုတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာပေးခြင်းထက်ရိုးရိုးနှစ်ခုခွဲခြားမှုအဖြစ်သူတို့ထဲကစဉ်းစားရန်ပိုမိုလွယ်ကူပါလိမ့်မယ်။ ဂျာမန်နှင့်အချို့သောအခြား Indo-ဥရောပဘာသာစကားများမတူဘဲ, စပိနျမျှလိင်မပါသောနာမ်ရှိပါတယ်။ (အနည်းငယ်ရှိပါတယ် လိင်မပါသော ကဲ့သို့သောနာမ်စား, lo နှင့် ello ကန့်သတ်ခွအေနမြေားအောက်တွင်အသုံးပြုကြသည်ကြောင်း, သို့သော်နှင့် lo လိင်မပါသောအမျိုးအစားအဖြစ်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ် အဓိပ္ပါယ်ဆောင်းပါး တစ်ခုစိတ္တဇနာမ်၏အဓိပ္ပါယ်ကိုပေး adjective နာမဝိသေသနနှင့်အတူ။ )
အခြေခံစည်းမျဉ်းပုလ်နာမ်ပုလ် adjective နာမဝိသေသနနှင့်ဆောင်းပါးများနှင့်အတူသွားသောဖြစ်ပြီး, ဣတ္နာမ်ဣတ္ adjective နာမဝိသေသနနှင့်ဆောင်းပါးများနှင့်အတူသွားပါ။ (အင်္ဂလိပ်ခုနှစ်, ဆောင်းပါးများ "ဟု", "တစ်" နဲ့ "။ " ဒါ့အပြင်စပိန်အများအပြား adjective နာမဝိသေသနအတွက်သီးခြားပုလ်နှင့်ဣတ္ပုံစံများရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုတာကိုသူတို့သတိပြုမိကြသည်။ ) ထိုအသင်တစ်ဦးပုလ်နာမ်ရည်ညွှန်းဖို့နာမ်စားကိုသုံးပါလျှင်မူကား, သင်တစ်ဦးပုလ်နာမ်စားသုံးတတ်၏ ဣတ္နာမ်စားနာမ် feminine ရည်ညွှန်း။
-O (သို့မဟုတ်ဘို့ -os အတွက်အဆုံးသတ်ကြောင်းနာမ်နှင့် adjective နာမဝိသေသန အများကိန်းများ ) ယေဘုယျအားဖြင့်ပုလ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ရှိပါတယ်ပေမယ့် -a (သို့မဟုတ်အများကိန်းများများအတွက်ဟူ.လည်း) တွင်အဆုံးသတ်ကြောင်းနာမ်နှင့် adjective နာမဝိသေသနယေဘုယျအားဖြင့်, ဣတ္များမှာ ခြွင်းချက် ။ ဥပမာအားဖြင့်, cada DIA "နေ့ရက်တိုင်း" ကိုဆိုလိုတယ်။ DIA ( "နေ့") တစ်ပုလ်နာမ်ဖြစ်၏ cada ( "အသီးအသီး") ဣတ္သို့မဟုတ်ပုလ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
သင်အမြဲတစ်နာမ်မှာရှာနေသို့မဟုတ်ပုလ်သို့မဟုတ်ဣတ္င်ရှိမရှိယင်း၏အဓိပ္ပာယ်ကိုသိရှိခြင်းအားဖြင့်မပြောနိုင်ကတည်းကအများဆုံးအဘိဓါနျဟာကျားမညွှန်ပြသင်္ကေတ (စသို့မဟုတ်မီတာ) ကိုအသုံးပြုပါ။ ထိုသို့ဣတ္ဤစကားသည်ပုလ်ဤစကားသည်တစ်ဦး el နှင့်ala နှင့်အတူစကားလုံးများကိုအရင်အဦးနေရာမှ, ဒီ site ကိုမှာထိုကဲ့သို့သောသူတို့အားများစွာသောအဖြစ်ဝေါဟာရစာရင်းအတွက်ကိုလည်းဘုံပါပဲ။ (အယ်လ်နှင့် la နှစ်ဦးစလုံး "လို့။ " ကိုဆိုလိုတာ)
ဒီနေရာမှာတစ်ဦးနာမ်ရဲ့ကျားကအခြားစကားများအသုံးပြုမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုနည်းလမ်းအချို့ပြသသောဥပမာဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျအပျေါသင်ခန်းစာများကိုလေ့လာတစ်ချိန်ကဥပမာအချို့မှာပိုပြီးနားလည်စေခြင်းငှါ adjective နာမဝိသေသန , ဆောင်းပါးများ နှင့်နာမ်စား။
ထိုလူ: el hombre (ပုလ်ဆောင်းပါး, ပုလ် noun)
ထိုမိန်းမသည်: la mujer (ဣတ္ဆောင်းပါး, ဣတ္ noun)
လူတ: un hombre (ပုလ်ဆောင်းပါး, ပုလ် noun)
အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်: una mujer (ဣတ္ဆောင်းပါး, ဣတ္ noun)
လူတို့သညျ: los hombres (ပုလ်ဆောင်းပါး, ပုလ် noun)
အမြိုးသမီးမြား: Las mujeres (ဣတ္ဆောင်းပါး, ဣတ္ noun)
ဆီဥကိုလူသ: el hombre gordo (ပုလ်နာမဝိသေသန, ပုလ် noun)
ဆီဥကိုအမြိုးသမီးတ: la mujer gorda (ဣတ္နာမဝိသေသန, ဣတ္ noun)
တချို့ယောက်ျား: unos hombres (ပုလ်ပြဌာန်းခွင့်, ပုလ် noun)
တချို့အမျိုးသမီးတွေ: unas mujeres (ဣတ္ပြဌာန်းခွင့်, ဣတ္ noun)
သူကအဆီဖြစ်ပါသည်: el es gordo ။ (ပုလ်နာမ်စား, ပုလ်နာမဝိသေသန)
သူမသည်အဆီဖြစ်ပါသည်: အဲလာ es gorda ။ (ဣတ္နာမ်စား, ဣတ္နာမဝိသေသန)
သငျသညျတစ်ခုတည်းနာမဝိသေသနနေဖြင့်ဖော်ပြထားလျက်ရှိသည်ကြောင်းနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောနာမ်များ, သူတို့သည်ရောနှောလိင်ဖြစ်ကြ၏လျှင်, ပုလ်နာမဝိသေသနကိုအသုံးပြုသည်။
ဥပမာ: အယ်လ် carro es caro, ကား (ပုလ်နာမ်နှင့်နာမဝိသေသန) စျေးကြီးသည်။ la bicicleta es Cara, စက်ဘီး (ဣတ္နာမ်နှင့်နာမဝိသေသန) စျေးကြီးသည်။ အယ်လ် carro က y la bicicleta သား caros, ကားနှင့်စက်ဘီး (ကပုလ်နာမဝိသေသနနေဖြင့်ဖော်ပြထားပုလ်နှင့်ဣတ္နာမ်) စျေးကြီးတယ်။
-n နဲ့ -en နောက်ဆုံးတွင်နှင့်အတူဂျာမန်အများကိန်းနာမ်အကြောင်းလေ့လာပါ
Il ya vs. Depuis
ဂျာမန်ကြိယာ conjugation - denken (စဉ်းစားရန်) - အတိတ်တင်းမာနေ
အကူးအပြောင်းနှင့် Intransitive ကြိယာ
10 Funny ဘာဂ်ပုစ္ဆာ
လပေါ်အဘယ်အရာကိုနီးလ်နှင့် Buzz လက်ဝဲ
'' အဖြူရောင်ဖန် '' Quotes
အဆိုပါ E7 ဂစ်တာ Chord Play3အမျိုးမျိုးနည်းလမ်းများ
တစ်ဦးအားပေးစေရန်လှုံ့ဆော်ခြင်းပြိုင်ပွဲပုံမှန်၏ပင်မ Element တွေကို: အပိုင်း 1
အက္ခရာအားသုံးသပ်ခြင်း '' တစ်ဦးအရောင်းစာရေး၏မရဏ ': လင်ဒါ Loman
Dracula: စတီဗင် Dietz အားဖြင့် Written အဆိုပါအဆင့် Play စ
'' မဟာဂက်စဘီ '' တှငျအမြိုးသမီးမြား၏အခနျးကဏ်ဍကဘာလဲ?
တစ်ဦးက မှစ. ငွေကျပ်တဆင့်ခြေရာခံများနှင့်ကွင်းဆင်းဝေါဟာရ